Fanontaniana 7 tokony hapetraka amin'ny fahafahanao misafidy alohan'ny sonia | Martech Zone
Fanontaniana 7 apetraho amin'ny fahafahanao misafidy alohan'ny hanaovan-tsonia
Alahady, Novambra 23, 2014 Alahady, Novambra 23, 2014 Douglas Karr
Tianay ny miara-miasa amin'ireo masoivoho hafa. Ny fahaizantsika manatsara ny motera fikarohana sy ny paikadin'ny atiny dia loharanom-pahalalana ho an'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny maso ivoho ary manohy mampitombo izany ampahan'ny orinasantsika izany. Miara-miasa amin'ny fampandrosoana sy famolavolana olona ary fifandraisana amin'ny daholobe izahay ary ny zavatra iombonantsika amin'izy rehetra dia ny fikatsahana ny valin'ny orinasa.
Raha tsy misy ny valin'ny asa aman-draharaha dia tsy maninona izay masoivohonao. Tranonkala nohavaozina izay tsy afaka mamadika dia tsy misy ilana azy. Tranonkala tsara tarehy izay tsy hita dia tsy misy ilana azy. Ny fikarohana, ny famolavolana ary ny fanoratana dia andoavanao vola be fa tsy azonao atao ny miverina tsy misy ilana azy (mihoatra ny famoahana voalohany).
Tohina tsy tapaka izahay amin'ny isan'ny mpanjifa tonga aty aminay izay nandany ny volany rehetra nefa tsy mahatsapa valiny. Ny antenaina ho antsika dia ny haka izay vola sisa tavela ary hiezaka ny hanana vokatra amin'izany. Indraindray, tsy vitantsika tsotra izao ny mampandeha azy.
Izany no mahatonga ny maodelinay hiasa somary miavaka amin'ny indostria. Izahay dia mitaky fifampiraharahana amin'ny sarany fisaka ary avy eo miasa amin'ny valiny. Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia mandany ny vidin'ny mpiasa tokana, saingy miasa kosa ny ekipanay sy ireo mpiara-miombon'antoka aminay mba hahazoana antoka fa azo ny vokatra azo.
Alohan'ny hanaovanao sonia ny fifanarahanao miaraka amin'ny masoivoho iray, mamporisika anao izahay hametraka ireto fanontaniana manaraka ireto:
Iza amin'ireo mpanjifa hafa no niara-niasa tamin'ny orinasao? Mety hieritreritra ianao fa manontany momba ny fifandonana mety hitranga, saingy tsy izany ihany no antony. Our fahafahana misafidy manohy manana fahombiazana mahatalanjona amin'ireo orinasa mifandraika amin'ny haitao marketing fa nianjera tamin'ny orinasa mpamokatra B2C sasany izahay. Noho izany antony izany dia mifantoka amin'ny sehatra iray izahay ary izay rehetra te hiara-miasa aminay ivelan'io sehatra io dia ampahalalana tsara mba hahazoana antoka fa afaka mamaly ny antenain'izy ireo izahay.
Iza no tompon'ny fisie loharano? Matetika io no olana lehibe indrindra lalovantsika. Ny masoivoho dia hamolavola izay ilainao fa mitazona ny tompony sy ny fifehezana ireo rakitra loharano rehetra izy ireo. Te hamerina ny asa ve ianao? Mila manontany ny maso ivoho ianao. Te hiala amin'ilay masoivoho ve ianao? Avy eo dia mila manomboka indray ianao. Tena mahasosotra. Ny fitazonana takalon'aina ny mpanjifanao dia tsy ny fampiroboroboanao ny orinasanao.
Inona no mitranga rehefa tsy mandeha izy? Ny masoivoho tsirairay dia mampiroborobo ny asa lehibe ataon'izy ireo saingy tsy miresaka momba ny tsy fahombiazana matetika izy ireo. Nahazo ny anjaranay koa izahay. Ny fanontaniana dia inona no hitranga manaraka. Raha miasa amina mpitazona iray ianao dia mety mila mandoa vola indray amin'ny maso ivoho ankehitriny na amin'ny vaovao hanandramana mahazo izay ilainao. Miasa sanda tsy miova izahay, hany ka omen'ny tsindry hazo lena. Ary amin'ny toe-javatra ratsy indrindra, fantatry ny mpanjifanay ihany koa ny famaranana ny fifandraisanay alohan'ny sonian'izy ireo (manao paikady, tatitra, antontan-taratasy ary fananana tanteraka izahay).
Inona no tafiditra, inona no fanampiny? Voatsindry mafy aho noho ny isan'ny orinasa mandefa tranokala na paikady hahitako fa tsy namboarina ho fikarohana na finday ilay tetikasa. Rehefa misy fanamby dia mamaly ilay masoivoho: “Tsy nangataka an'izany ianao.” Huh? Sao sangisanginao izany? Raha mitady ny mpanjifanao ny masoivohonao dia manizingizina ianao ny hanao ny zava-drehetra mba hampitomboana ny valin'ny orinasa.
Ahoana no hitantanana ny fananana? Tsy maninona raha manana sampan-draharaha mividy sehatra ianao, fampiantranoana, lohahevitra, na fakana sary… fa iza no tompony? Tsy misy ratsy kokoa noho ny maso ivoho iray izay tsy mandray andraikitra ary mandeha miaraka amin'ny fonenanao (eny, mbola mitranga io). Hamarino tsara fa manana fifanarahana vita vy ianao fa anao ny fananana rehetra. Izany no mahatonga anay matetika mahazo carte de crédit amin'ny mpanjifantsika ary mividy serivisy amin'ny anarany. Ny fananana adiresy mailaka ao amin'ny vondrona ahafahanao manampy / manaisotra ny masoivohonao dia fomba tsara hitantanana ireo kaonty ireo izay tsy hahafoizanao azy ireo mihitsy.
Inona avy ireo fitaovana ampiasain'izy ireo? Na dia nosoratanay manokana manokana aza ny sehatra sasany ho an'ny mpanjifanay dia mbola misokatra sy manao ny marina aminay amin'ireo fitaovana ampiasainay izahay. Ny tombony amin'ny maha maso ivoho dia ny fahafahantsika mividy lisansa orinasa amin'ny rindrambaiko ampiasainay ho an'ny mpanjifa marobe. Irery, tsy afaka mividy azy ireo ny mpanjifanay fa afaka manome azy ireo fidirana miaraka izahay. Izany dia tsy vitan'ny manome ny mpanjifanay fahalalana momba ny sanda ampiasainay, fa avelany ho hitan'izy ireo manokana ihany koa ny kalitao sy ny lazan'ireo fitaovana ampiasainay.
Ahoana koa no ahafahan'izy ireo manampy anao? Aleo - ratsy toetra aho hatreto ka aleo miabo. Ho gaga ianao indraindray noho ny talenta sy tetikasa marobe eo ambanin'ny fehin-kevitry ny masoivoho iray. Antsika manokana io, fa indraindray fantatsika fa nanofa loharano hafa iray hafa ho an'ny asa izay azonay natao ho azy ireo ny mpanjifanay. Tsy misy mahasosotra kokoa! Hamarino tsara fa mifampiresaka amin'ireo masoivohonao ianao momba ny asa lehibe efa vitany sy ny sasany amin'ireo sehatra ifantohany ananany fahaiza-manao. Satria efa manana fifandraisana ianao, ny manampy amin'ny serivisy sy tetikasa hafa dia matetika no mora kokoa noho ny manomboka vaovao amin'ny loharano vaovao.
Nizara infographic mampihomehy izahay rehefa ela ny ela fifandraisana amin'ny mpanjifa mpanararaotra hidiran'ny masoivoho. Saingy ny fanararaotana dia mety hitranga amin'ny lafiny roa amin'ny fifandraisana ary ilaina ny tsy fanararaotan'ny maso ivoho anao. Tsy vitan'ny hoe mijaly ny paikadinao, fa mety ho very koa ny teti-bolanao.
Heveriko fa izany rehetra izany dia azo fintinina amin'ny fanontaniana iray. Miasa ve ny masoivohonao hiantohana ny valin'ny orinasanao na ny azy? Mino izahay rehefa mahazo tombony ny mpanjifanay, dia toy izany koa izahay… ka izany no laharam-pahamehana foana.
Tags: fahafahana misafidyolan'ny masoivohofanontaniana momba ny maso ivohofifandraisana amin'ny masoivoho
Mandamina indray, manoratra indray ary mampiato ny atiny
27 Novambra 2014 à 3:16
Noho izany dia amin'ny 2 ora maraina ny Thanksgiving ary tsia, tsy nandany ny alina manontolo aho tamin'ny fandefasana mailaka ho an'izay rehetra isaorako na dia manao izany amin'ny vavaka aza aho. Mbola manadio mailaka aho amin'ny maha-bandy olona 1 manangana orinasa tsy mitady tombontsoa miaraka amin'ny tranokala antenaina hatomboka amin'ity taona vaovao ity. Ny fanehoan-kevitro eto ho an'i Doug dia fisaorana ampahibemaso, ny lahatsorany ankehitriny dia maneho ny fahamendrehana, ny fitsipi-pitondran-tena ary ny mangarahara izay nahasarika ahy voalohany taona maro fony izahay samy nanohana tamim-pahavitrihana ny “Indiana kely kokoa” talohan'ny nisian'ny Facebook. Ny fanerena ny fisotroan-dronono aloha sy ny fahasitranana tamin'ny aretim-po dia nitarika ahy tao amin'ny toko farany niaraka tamin'Andriamanitra, mpiara-miompy Havanese 10 kilao efa misotro ronono, Fiarovana ara-tsosialy ary solosaina iray mitondra kilaometatra lavitra noho ny fanangonako. Izaho no ohabolana nerd saingy vetivety dia nianatra fa tsy ho asa vaovao ny eBay fa ny traikefa eo amin'ny fiainana dia nanome ahy ny fitiavako ny eCommerce, mitovy amin'ny fitarihana indray ny Antenimieran'ny varotra sy ny fiaraha-miasa amin'ny tompona orinasa fa voafetra ho an'ny fananana tsy miankina sy Indiana. Satria lasa fitiavana ny tetik'asako dia lasa tiako sy hajaiko koa Douglas Karr amin'ny alàlan'ny fandefasana azy amin'ny tambajotra sosialy ary koa ny bilaoginy. Tsy fantany fa ny fahaizany matihanina dia tsy mahasarika azy tahaka an'i Doug ilay olona. Mahatsikaiky fa ny nerd solosaina feno dia mahita fifandraisana toy izany miaraka amin'ny Geeker vita sy malaza, olona izay tsapanao matetika fa namana sy mpanoro hevitra mandritra ny androm-piainany raha mahatsapa fa indroa ihany no nitranga ny resaka nifanatrika nandritra ireo taona ireo. Eny, ao amin'ny nofo izy tahaka ny fahitako azy amin'ny Internet miaraka amin'ny bilaoginy sy ny toetran'ny media sosialy ka tsy ilaina ny mahita azy matetika mba hahazoana antoka fa tena izy tokoa. Mizara tia sy tsy tia maro isika nefa indraindray tsy mitovy hevitra ampahibemaso; (Tsarovy fa tompon'ny informatika tsy misy fahalalana aho ka tsy barometera ara-drariny izany,) fa ny fomba fijerintsika ara-pinoana, ara-moraly, ara-tsosialy, ara-kolontsaina ary ara-politika dia matetika mifanitsy ary mametraka ny fitokisana amin'ny fanekena ny heviny sy ny fitarihany matihanina. Fisaorana izao ary ny fahitana indray ity mangarahara ao anatin'ny bilaogy ity dia mitondra ahy hizara sombim-pisaorana manokana ho anao sy ho anao.